!!अन्त्यमा!! एप्पल भर्खरै iBooks अपडेट गरियो आईफोन समाचार
आईओएस of को रिलीज पछि, अनुप्रयोग अद्यावधिकहरू भित्र पस्दै छन्। प्रणाली भित्र आउने अनुप्रयोग हुनाले यो नयाँ आईओएस सुरु भएको बेलामा यो अद्यावधिक भएको थिएन भन्ने समझ राख्दैन। जे भए पनि, एप्पलले भर्खरै अपडेट जारी गर्‍यो सबै iBooks प्रयोगकर्ताहरू द्वारा अपेक्षित, नयाँ इन्टरफेसमा अनुकूलित।
प्रणालीमा मानकको रूपमा यस अनुप्रयोगको अद्यावधिकaमा उपलब्ध छ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र। काठको तखता पूरै हराइसकेको छ। यो कसरी हुन सक्दछ, अब अनुप्रयोगको पृष्ठभूमि सेतो शेल्फ हो।
अलि अलि गर्दै, skeumorphism आईओएस7बाट गायब हुँदैछ। अब इन्टरफेस नयाँ आईओएस जस्तै फ्ल्याट छ, ओएस एक्सको लागि आईबुकको डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो छ र रिमोटले भर्खरै जारी गरेको हो।
अब जब तपाइँ नयाँ के ब्राउज गर्न आईबुकबाट स्टोरमा स्विच गर्नुहुन्छ, त्यहाँ डिजाईनमा त्यस्तो कठोर परिवर्तन हुने छैन जब यो नयाँ ईन्टरफेसमा अनुप्रयोग अनुकूलित नभएको बेला भयो।
आइकन IOS7मा पनि अनुकूलित गरिएको छ। खुला अनुप्रयोग जसले पहिले अनुप्रयोगको प्रतिनिधित्व गर्‍यो, खुला "पुस्तक" लाई मार्ग दिईएको छ, जुन तपाईं यसलाई हेर्दा कागजको विमान जस्तो देखिन्छ र एक सुन्तला पृष्ठभूमिसँगै।
पढ्ने दृश्य पनि अनुकूलित गरिएको छ। पुरानो सौन्दर्यताको अब कुनै अंश छैन जहाँ हामी स्ट्याक्ड पृष्ठहरू देख्न सक्छौं। पढ्ने दृश्य भित्रबाट उपलब्ध कार्यहरू अझै उही स्थानमा छन्।
याद गर्नुहोस् कि iBooks को माध्यमबाट हामी गर्न सक्छौं एप्पल स्टोरबाट पुस्तकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, वा नयाँ पीडीएफ फाईलहरू जोड्नुहोस्। अरु के छ त हामी हाम्रो आफ्नै कोटी सिर्जना गर्न सक्छौं हाम्रो विशेष वर्गीकरण गर्न। उदाहरण को लागी, यदि हामी फोटोग्राफी को शौकित छौं, हामी पुस्तकालय ब्राउज बिना नै, अधिक हात मा गर्न, संग्रह मा यस विषय को बारे मा कुरा गर्ने सबै पुस्तकहरु सामेल गर्न सक्दछौं।
थप जानकारी - आईबुक स्टोर ठूलो पुस्तक कभरको साथ अपडेट गरिएको छ
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» !!अन्त्यमा!! एप्पल भर्खर आईबूकहरु अपडेट भयो
भयानक! एप्पल मात्र बाँकी रहेको राम्रो चीज लोड गर्न सकियो ... यो अनुप्रयोग राम्रो थियो अब यस्तो देखिन्छ कि हामी पागल घरमा छौं जुन सबै सेतो र चिसो छ ... भगवान् ...
पछिल्लो समय जब म त्यहाँबाट पारें, यो यो थिएन कि तपाईं यसलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ।
शेमालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हुनसक्छ केहि चीजहरूमा skeumorphism केहि एक गीत गाउन सक्छ, तर सामान्यतया म लाग्छ यो पछाडि गएको छ। नयाँ आईबुक अनुप्रयोग यसको पुरानो संस्करणको तुलनामा मलाई पीडादायी छ।
मलाई मेरो आईओएस iOS आईओएस than भन्दा बढी मनपर्दछ, तर यो सत्य हो कि केहि अनुप्रयोगहरूमा उनीहरूले यसलाई आधुनिक र न्यूनतम स्पर्श दिन सकेका छैनन् यसलाई सुस्त र सरल बनाउँदै। iBooks ती मध्ये एक हो।
मैले अघिबाटै डिजाईन रुचाएँ।
डिएगो पारा भन्यो
म यो सेतो पृष्ठभूमि बिल्कुल बोरिंग लाग्छ ..... यो एप्पलको खराब निर्णय थियो। यस अनुप्रयोगमा पढ्नको लागि म पहिले नै शारीरिक रूपमा अल्छी छु
डिएगो पारालाई जवाफ दिनुहोस्
भयानक नयाँ "डिजाईन।" अघिल्लो एक अति उत्तम थियो।
हरेक दिन मलाई कम स्याउ मन पर्छ।
Monky लाई जवाफ दिनुहोस्
परी गार्सिया भन्यो
नयाँ आईबुक ईन्टरफेस चुस्छ, यो चिसो, सरल र बोरिंग छ, कम प्रोफेक्स ले यस चीजमा केहि पढिरहेको छ !!!, अघिल्लो संस्करणले महसुस गर्न सक्छ कि तपाई वास्तवमै किताब पढ्दै हुनुहुन्छ, नयाँ संस्करणले यी सबै हरायो!
एन्जिल गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया मर्सिडीज सलोम रोइग भन्यो
मलाई बुकसेल्फ चाहिन्छ
मारिया मर्सिडीज सलोम रोइगलाई जवाफ दिनुहोस्
नयाँ संस्करणको साथ सबै पुस्तकहरू हराइसकेका छन्। म कसरी तिनीहरूलाई फिर्ता पाउन सक्छु?
पहिले नै राम्रो कुरालाई परिवर्तन गर्नु किन आवश्यक छ? तपाईंले यो खराब गर्नुभयो। कृपया आईओएस in मा भएको दृश्यमा फिर्ता जानुहोस्